कोरोना लाग्यो ? यी खानेकुरा खानुस्, रोगसँग लड्ने शक्ति मिल्छ – hamrosandesh.com
डाक्टरहरू भन्छन्, ‘कोरोना निको हुने कुरा व्यक्ति स्वयम्‌मा भर पर्छ । त्यसैले खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ । जोसँग राेग प्रतिराेधात्मक क्षमता (इम्युनिटी पावर) धेरै छ, उसले रोगसँग सजिलै लड्न सक्छ । त्यसैले आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई इम्युनिटी पावर बढाउने खानेकुरा खुवाउनुपर्छ ।
ज्वानो, मेथी, बेसार र मरिच, तुलसीको पत्ता त अक्सर हाम्राे भान्सामा हुन्छन् नै । यी चीज त तरकारीमा हालेर बिहानबेलुकै खाने गरिन्छ । संक्रमितलाई सादा खाना खुवाउनुपर्छ पनि भनिन्छ, तर यसाे गर्न हुँदैन । जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती ज्वानो, मेथी, बेसार, मरिच मिसाएर बनाएको मसालाजन्य तरकारी खान सुझाउँछिन् । यसबाट संक्रमितमा खानाप्रतिको अरुचि पनि हुँदैन र इम्युनिटी बढाउनका लागि मद्दत पनि मिल्छ । उनले भनिन्, ‘तुलसीको पात, शीतलचिनीलगायतका जडीबुटी संक्रमतिलाई खुवाउने हो भने इम्युनिटी पावर बढ्छ ।’
घरमा संक्रमित छन् भने उनीहरूलाई जंक फूड नदिन डा. अरुणा सुुझाउँछिन् । जंक फुडकाे साटो घरमै भएको कोदो, फापर, गहुँ, मकै, अण्डा खान दिनुपर्छ । उनी भन्छिन्, ‘बरु दालभात खानु, तर जंक फुड खानबाट बच्नुपर्छ ।’